डिस्पोजेबल मास्कले वातावरणलाई दूषित गर्न सक्ने
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यडिस्पोजेबल मास्कले वातावरणलाई दूषित गर्न सक्ने
विराटनगर / डिस्पोजेबल मास्कले वातावरणलाई दूषित गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
मास्कले रासायनिक प्रदूषण तथा नानोप्लाष्टिक उत्सर्जन गर्न सक्ने बेलायतको स्वानसी विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनले देखाएपछि वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् । वैज्ञानिकहरूका अनुसार प्रयोग गरेर फालिएको मास्कलाई पानीमा डुबाउँदा धातु र प्लास्टिक फाइबर निस्किएको हुँदा यसमा थप अध्ययन हुनुपर्छ ।
महामारीअघि प्लास्टिक स्ट्र, प्याकेजिङ घटाउने विषयमा काम गरिरहे पनि हालको समयमा सयौँ, हजारौँ मास्क डिस्पोज गरिरहेको अध्ययनका प्रमुख डा. सार्पर सार्प बताउँछन् । उनका अनुसार प्राथमिकतालाई क्रमबद्ध गर्न जरुरी रहेको हुँदा सबैभन्दा पहिले महामारीबाट जोगिन र जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नुपर्छ । त्यसपछि वातावरणलाई संरक्षण गर्न कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
गत वर्षको नोभेम्बरपछि परीक्षण गर्दै जाँदा वैज्ञानिकहरूले मास्कमा धेरै रसायनहरु भेट्टाएका थिए । यी रसायनहरू मास्क उत्पादन गर्दा प्रयोग गरिने रङहरुसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ । परीक्षण गरिएका हरेक मास्कबाट लिड (सिसा), एन्टिमोनी र क्याडमियमजस्ता हानिकारक रसायन पाइएको थियो ।
स्वानसी विश्वविद्यालयका डा. गेराएन्ट सुलिवानका अनुसार यस्ता धातुहरू पानीबाट छुट्ट्याउन सकिँदैन र सञ्चित भएर लामो समयसम्म रहन्छ । यो समस्या तत्कालका लागि ठूलो नदेखिए पनि यसले भविष्यमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ । मास्क लगाउनुका फाइदा धेरै छन् र यसको प्रयोग गर्न जरुरी हुन्छ ।
तर, मास्क बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तरको विषयमा नियम बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
दूषित मास्क वातावरण